ဂန္ဓမာနဲ့ Ruby Mart ကုန်တိုက်တွေမီးလောင်မှု ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသေး
ဂန္ဓမာကုန်တိုက် မီးလောင်နေသည့်မြင်ကွင်း ( အေပြီလ ၁၊ ၂ဝ၂၁) ဓါတ်ပုံ Myanmar Fire Services Department Facebook
ရန်ကုန်မြို့က စစ်တပ်ပိုင်ကုန်တိုက်ကြီး ၂ ခု ဒီနေ့ မနက်အစောကြီးမှာ မီးလောင်ခဲ့တဲ့အပေါ် ရန်ကုန်မြို့ခံတွေကြား အံ့သြ နေကြပါတယ်။ ဘာတွေမီးလေလာင်သွားပြီး ဘယ်လိုထူးခြားမူတွေရှိနေပါလဲ၊ အမည်မဖော်လိုတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ခံတချို့ကို ကိုဝင်းမင်းက ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီး တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီစစ်တပ်ပိုင် ကန္ဓမာ Wholesale ကုန်တိုက်ကြီးရှိရာ၊ မရမ်းကုန်းမြို. (၈) ရပ်ကွက်နေ၊ အမည်မဖော်လိုသူတစ်ဦးက စတင်သိရပုံကို -
"ညထဲကတော့ ဒီမီးလောင်တယ်ဆိုတာကို သိရတယ်ပေါ့နော်၊ (၁) နာရီနဲ့ (၂) နာရီ ဝန်းကျင်မှာဖြစ်မယ်ထင်တယ်၊ ကျွန်တော်တို့ အချိန်အတိအကျကိုတော့ မသိဘူးပေါ့။ မီးလောင်တာသိတော့၊ ရပ်ကွက်ထဲကလူတွေကတော့၊ အကုန်လုံး အဲ့ဒီကိုသွားတော့မကြည့်ဘူးပေါ့နော်၊ အကုန်လမ်းထိပ်တွေကပဲ ထွက်ကြည့်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ မီးခိုးတွေတွေ့ရတယ်။
"တချို.ကျတော့လဲ ဒီမီးတွေမြင်ရတယ်လို့ပြောတယ်။ အဲ့ဒီနားသွားဖို့ကတော့၊ ဒီ ဂန္ဓမာလမ်းမပေါ်ကိုတက်ရမှာဆိုတော့၊ Curfew (ညမထွက်ရအမိန့်) အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ ကျွန်တော်တိုသွားမကြည့်လိုက်ဘူး။ မနက်ကျမှ ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လိုက်တာ။ သွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့၊ (၁) နာရီထိုးထဲကမီးက၊ မနက်မိုးလင်း၊ ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ဆို (၈) နာရီလောက်ရှိပြီ၊ အဲ့ဒိအချိန်ထိကိုသူတို့ အထဲမှာ မငြှိမ်းနိုင်သေးဘူး။ ငြှိမ်းနေရသေးတာ။ မြင်ရသလောက်တော့ အကုန်လုံး ဟောင်းလောင်းပေါက်တွေ ဖြစ်နေတာ။ အထဲမှာ ပစ္စည်းတချို.၊ မီးလောင်ထားတဲ့ဟာတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ အဲ့ဒီ မီးခိုးအမဲတွေတက်တယ်၊ နောက်တော့ အခုမှ ပစ္စည်းတစ်ခုခု အခုမှစ မီးစစွဲလို့၊ မီးခိုးအဖြူတွေတက်တာမျိုး၊ အဲ့ဒါမျိုးတော့မြင်ရတယ်။ ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့၊ ကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုလည်း၊ အညှော်နံ့တွေထွက်တဲ့အခါကျတော့၊ အနံမျိုးစုံရတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိတယ်။"
ဒါ့အပြင် မီးသတ်အင်အားနဲ့ လုံခြုံရေးအနေအထားတွေ့ခဲ့ရပုံကိုလည်း၊ ဂန္ဓမာလမ်းနဲ့ ဝေဇန္တာယာလမ်းထောင့်က ဒီကုန်တိုက်ကြီးရှိ ရပ်ကွက်ထဲနေထိုင်သူကပဲ အခုလိုရှင်းပြပါတယ်။
"မီးသတ်အင်အား ကျွန်တော်တို့တွေ့ရသလောက်ဆိုရင်တော့၊ အနောက်ဖက်မှာတော့ သူတို့ (၂) စီးလောက်ရှိမယ်၊ မြဝတီဘဏ်ဘက်ခြမ်း အပိုင်းက ငြှိမ်းနေတာ။ အဲ့ဒိ (၂) စီးက လူကယ်တဲ့ ကရိန်းလိုမျိုးကြီးနဲ့ ဖြန်းတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ ပြီးသွားတော့ အရှေမှာက ကျတော့လည်း (၂) စီးရှိတယ်။ ပြီးသွားရင်၊ ဒီဘက်ဘေး ဝေဇယန္တာဘက်မှာ ရပ်ထားတာ (၁) စီးရှိမယ်။ ပြီးသွားတော့အဲ့ဒိဖက်မှာ ရေသန့်ရှိတော့ ရေဖြည့်နေတာ (၂) စီးဆိုတော့၊ စုစုပေါင်း (၆) စီး (၇) စီးလောက်တော့ရှိမယ်ဗျ။ ဒါကျွန်တော်မြင်သလောက်ပေါ့နော်၊ Total (စုစုပေါင်း) ဘယ်နှစ်စီးဆိုတာ၊ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။ နောက်၊ လုံခြုံရေး သူတို့ယူထားတယ်ပေါ့နော်။ အနားမှာ သူတို့ စစ်သားတွေရှိမယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ သိသလောက်တော့၊ အရင်ထဲက အဲ့ဒိမှာ တပ်စွဲထားတယ်လို့တော့သိထားတယ်။"
အလားတူး စစ်တပ်ပိုင် နောက်ကုန်တိုက်တခုရှိတဲ့၊ ရန်ကုန်မြို.ထဲ ပန်းဆိုးတန်း Ruby Mart မီးလောင်ခဲ့တာကို သွားကြည့်ခဲ့တဲ့၊ ရန်ကုန်မြို.နေသူတစ်ဦးကလည်း အခုလိုရှင်းပြပါတယ်။
" နေ့ခင်း (၁၂) နာရီလောက်က၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းကို ဆူးလေကနေစပြီးတော့ ပိတ်ထားလိုက်တယ်။ ဘယ်ဖက်ကနေ ပြန်ပတ်သွားရသလဲဆိုတော့၊ အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်းကနေ ပြန်ပတ်ပြီးတော့၊ဆင်းလာတော့၊ အဲ့ဒီ Ruby Mart ကိုကတော့၊ ကားပေါ်ကပဲ မြင်ခဲ့တာပေါ့နော်။ အဆောက်အဦးတစ်ခုလုံး မီးတွေလောင်ပြီး ကျွမ်းနေတယ်ပေါ့။ အဆောက်အဦးအခွံ၊ အုတ်နံရံနဲ့ တိုင်တွေပဲကျန်တော့တယ်။ ဘာမှမရှိတော့ဘူး။ အကုန်လောင်တယ်။ အဲ့ဒီကဘေးဖက်အဆောက်အဦးတွေတော့ လောင်တာမတွေ့ရဘူး။ အဲ့ဒီ အဆောက်အဦး (၁) ခုထဲပဲ။ ဒီ Curfew (ညမထွက်ရအမိန့်)အချိန်လဲဖြစ်တော့၊ စလောင်စဉ် တခြားအဲ့ဒီနား ဘယ်သူမှလည်း ဖြတ်သွားဖြတ်လာမရှိဘူးလေ၊ အဲ့ဒိအချိန်ဆိုတော့၊ လောင်တာက ရိုးရိုးတန်းတန်းလောင်တာနဲ့တော့ မတူဘူးပေါ့။"
အဲ့ဒီတော့၊ အခုလို မီးလောင်မူ (၂) ခု၊ ထူးထူးခြားခြားဖြစ်လာပုံကို၊ ရန်ကုန်မြို.နေ နောက်သုံးသပ်သူတဦးက -
"ဒီနေ့ကတော့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်၊ စစ်တပ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (၂) ခု၊ တပြိုင်တည်းနီးပါး မီးလောင်ခဲ့တော့၊ နည်းနည်းလေး တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်လေးတော့ ရှိတယ်။"
ဒါ့အပြင် ဒီ ဂန္တာမာကုန်တိုက်ကြီး မီးလောင်မူမှာ နောက်ထပ် ထူးခြားခဲ့ပုံကိုလည်း၊ ဒဂုံတက္ကသိုလ် IR နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ကျောင်းသား (၁) ဦးက -
"ကျွန်တော်တို့ (၈) နာရီ (၄၅) မီးနစ် ဝန်းကျင် လောက်ကပေါ့၊ ဒီ ဂန္ဓမာ Wholesale ရောက်တဲ့အချိန်မှာ၊ CNN သတင်းထောက်ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အကီင်္ျက
ပန်းရောင်သန်းတယ်ပေါ့၊ အနီမကျ၊ ပန်းရောင်မကျနဲ့၊ ဒီ ဘောင်းဘီဝတ်ထားတယ်၊ ဒီ CNN သတင်းထောက်ကလေ။ ကျွန်တော်တို့ထင်တာက၊ ဒီ CNN သတင်းထောက်က၊ ဒီ ရန်ကုန်မြို.မှာရှိတဲ့ဆန္ဒပြပွဲနေရာတွေကို သွားရောက်လေ့လာစုံစမ်းမယ်ထင်နေတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ သွားကြည့်တဲ့နေရာမှာ၊ သူက ဒီမီးလောင်တဲ့နေရာကို သွားစုံစမ်းနေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်ပေါ့။ မီးလောင်တဲ့နေရာကို၊ သူက လျှောက်ပတ်ကြည့်နေတာပေါ့။"
တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံထဲ စစ်အာဏာသိမ်းဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမူတွေကို၊ စစ်တပ်က ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းရာမှာ၊ အရင် မီးလောင်မူ တချို.ရှိခဲ့ပေမဲ့၊ ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ ကြီးမား ထူးခြားတယ်လို့ သုံးသပ်သူတွေက ဆိုနေပါတယ်။
ဂန္ဓမာကုန်တိုက် မီးလောင်နေသည့်မြင်ကွင်း ( အေပြီလ ၁၊ ၂ဝ၂၁)
ရနျကုနျမွို့က စဈတပျပိုငျကုနျတိုကျကွီး ၂ ခု ဒီနေ့ မနကျအစောကွီးမှာ မီးလောငျခဲ့တဲ့အပျေါ ရနျကုနျမွို့ခံတှကွေား အံ့သွ နကွေပါတယျ။ ဘာတှမေီးလလောငျသှားပွီး ဘယျလိုထူးခွားမူတှရှေိနပေါလဲ၊ အမညျမဖျောလိုတဲ့ ရနျကုနျမွို့ခံတခြို့ကို ကိုဝငျးမငျးက ဆကျသှယျမေးမွနျးပွီး တငျပွထားပါတယျ။
ဒီစဈတပျပိုငျ ကန်ဓမာ Wholesale ကုနျတိုကျကွီးရှိရာ၊ မရမျးကုနျးမွို. (၈) ရပျကှကျနေ၊ အမညျမဖျောလိုသူတဈဦးက စတငျသိရပုံကို -
"ညထဲကတော့ ဒီမီးလောငျတယျဆိုတာကို သိရတယျပေါ့နျော၊ (၁) နာရီနဲ့ (၂) နာရီ ဝနျးကငျြမှာဖွဈမယျထငျတယျ၊ ကြှနျတျောတို့ အခြိနျအတိအကကြိုတော့ မသိဘူးပေါ့။ မီးလောငျတာသိတော့၊ ရပျကှကျထဲကလူတှကေတော့၊ အကုနျလုံး အဲ့ဒီကိုသှားတော့မကွညျ့ဘူးပေါ့နျော၊ အကုနျလမျးထိပျတှကေပဲ ထှကျကွညျ့လိုကျတယျ။ ကြှနျတျောတို့ မီးခိုးတှတှေရေ့တယျ။
"တခြို.ကတြော့လဲ ဒီမီးတှမွေငျရတယျလို့ပွောတယျ။ အဲ့ဒီနားသှားဖို့ကတော့၊ ဒီ ဂန်ဓမာလမျးမပျေါကိုတကျရမှာဆိုတော့၊ Curfew (ညမထှကျရအမိနျ့) အခြိနျဖွဈတဲ့အတှကျ၊ ကြှနျတျောတိုသှားမကွညျ့လိုကျဘူး။ မနကျကမြှ ကြှနျတျောတို့သှားကွညျ့လိုကျတာ။ သှားကွညျ့လိုကျတဲ့အခါကတြော့၊ (၁) နာရီထိုးထဲကမီးက၊ မနကျမိုးလငျး၊ ကြှနျတျောရောကျသှားတဲ့အခြိနျဆို (၈) နာရီလောကျရှိပွီ၊ အဲ့ဒိအခြိနျထိကိုသူတို့ အထဲမှာ မငွှိမျးနိုငျသေးဘူး။ ငွှိမျးနရေသေးတာ။ မွငျရသလောကျတော့ အကုနျလုံး ဟောငျးလောငျးပေါကျတှေ ဖွဈနတော။ အထဲမှာ ပစ်စညျးတခြို.၊ မီးလောငျထားတဲ့ဟာတှကေိုလညျးတှရေ့တယျပေါ့နျော။ အဲ့ဒီ မီးခိုးအမဲတှတေကျတယျ၊ နောကျတော့ အခုမှ ပစ်စညျးတဈခုခု အခုမှစ မီးစစှဲလို့၊ မီးခိုးအဖွူတှတေကျတာမြိုး၊ အဲ့ဒါမြိုးတော့မွငျရတယျ။ ပွီးသှားတဲ့အခါကတြော့၊ ကြှနျတျောတို့အပွငျကိုလညျး၊ အညှျောနံ့တှထှေကျတဲ့အခါကတြော့၊ အနံမြိုးစုံရတဲ့ဟာမြိုးလညျးရှိတယျ။"
ဒါ့အပွငျ မီးသတျအငျအားနဲ့ လုံခွုံရေးအနအေထားတှခေဲ့ရပုံကိုလညျး၊ ဂန်ဓမာလမျးနဲ့ ဝဇေန်တာယာလမျးထောငျ့က ဒီကုနျတိုကျကွီးရှိ ရပျကှကျထဲနထေိုငျသူကပဲ အခုလိုရှငျးပွပါတယျ။
"မီးသတျအငျအား ကြှနျတျောတို့တှရေ့သလောကျဆိုရငျတော့၊ အနောကျဖကျမှာတော့ သူတို့ (၂) စီးလောကျရှိမယျ၊ မွဝတီဘဏျဘကျခွမျး အပိုငျးက ငွှိမျးနတော။ အဲ့ဒိ (၂) စီးက လူကယျတဲ့ ကရိနျးလိုမြိုးကွီးနဲ့ ဖွနျးတာကိုတှရေ့တယျပေါ့နျော။ ပွီးသှားတော့ အရှမှောက ကတြော့လညျး (၂) စီးရှိတယျ။ ပွီးသှားရငျ၊ ဒီဘကျဘေး ဝဇေယန်တာဘကျမှာ ရပျထားတာ (၁) စီးရှိမယျ။ ပွီးသှားတော့အဲ့ဒိဖကျမှာ ရသေနျ့ရှိတော့ ရဖွေညျ့နတော (၂) စီးဆိုတော့၊ စုစုပေါငျး (၆) စီး (၇) စီးလောကျတော့ရှိမယျဗြ။ ဒါကြှနျတျောမွငျသလောကျပေါ့နျော၊ Total (စုစုပေါငျး) ဘယျနှဈစီးဆိုတာ၊ကြှနျတျောလညျးမသိဘူး။ နောကျ၊ လုံခွုံရေး သူတို့ယူထားတယျပေါ့နျော။ အနားမှာ သူတို့ စဈသားတှရှေိမယျ။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျတျောတို့ သိသလောကျတော့၊ အရငျထဲက အဲ့ဒိမှာ တပျစှဲထားတယျလို့တော့သိထားတယျ။"
အလားတူး စဈတပျပိုငျ နောကျကုနျတိုကျတခုရှိတဲ့၊ ရနျကုနျမွို.ထဲ ပနျးဆိုးတနျး Ruby Mart မီးလောငျခဲ့တာကို သှားကွညျ့ခဲ့တဲ့၊ ရနျကုနျမွို.နသေူတဈဦးကလညျး အခုလိုရှငျးပွပါတယျ။
" နခေ့ငျး (၁၂) နာရီလောကျက၊ ဗိုလျခြုပျလမျးကို ဆူးလကေနစေပွီးတော့ ပိတျထားလိုကျတယျ။ ဘယျဖကျကနေ ပွနျပတျသှားရသလဲဆိုတော့၊ အထကျပနျးဆိုးတနျးလမျးကနေ ပွနျပတျပွီးတော့၊ဆငျးလာတော့၊ အဲ့ဒီ Ruby Mart ကိုကတော့၊ ကားပျေါကပဲ မွငျခဲ့တာပေါ့နျော။ အဆောကျအဦးတဈခုလုံး မီးတှလေောငျပွီး ကြှမျးနတေယျပေါ့။ အဆောကျအဦးအခှံ၊ အုတျနံရံနဲ့ တိုငျတှပေဲကနျြတော့တယျ။ ဘာမှမရှိတော့ဘူး။ အကုနျလောငျတယျ။ အဲ့ဒီကဘေးဖကျအဆောကျအဦးတှတေော့ လောငျတာမတှရေ့ဘူး။ အဲ့ဒီ အဆောကျအဦး (၁) ခုထဲပဲ။ ဒီ Curfew (ညမထှကျရအမိနျ့)အခြိနျလဲဖွဈတော့၊ စလောငျစဉျ တခွားအဲ့ဒီနား ဘယျသူမှလညျး ဖွတျသှားဖွတျလာမရှိဘူးလေ၊ အဲ့ဒိအခြိနျဆိုတော့၊ လောငျတာက ရိုးရိုးတနျးတနျးလောငျတာနဲ့တော့ မတူဘူးပေါ့။"
အဲ့ဒီတော့၊ အခုလို မီးလောငျမူ (၂) ခု၊ ထူးထူးခွားခွားဖွဈလာပုံကို၊ ရနျကုနျမွို.နေ နောကျသုံးသပျသူတဦးက -
"ဒီနကေ့တော့ တိုကျတိုကျဆိုငျဆိုငျ၊ စဈတပျပိုငျစီးပှားရေးလုပျငနျး (၂) ခု၊ တပွိုငျတညျးနီးပါး မီးလောငျခဲ့တော့၊ နညျးနညျးလေး တိုကျတိုကျဆိုငျဆိုငျလေးတော့ ရှိတယျ။"
ဒါ့အပွငျ ဒီ ဂန်တာမာကုနျတိုကျကွီး မီးလောငျမူမှာ နောကျထပျ ထူးခွားခဲ့ပုံကိုလညျး၊ ဒဂုံတက်ကသိုလျ IR နိုငျငံတကာဆကျဆံရေး ကြောငျးသား (၁) ဦးက -
"ကြှနျတျောတို့ (၈) နာရီ (၄၅) မီးနဈ ဝနျးကငျြ လောကျကပေါ့၊ ဒီ ဂန်ဓမာ Wholesale ရောကျတဲ့အခြိနျမှာ၊ CNN သတငျးထောကျကိုလညျး ကြှနျတျောတို့ တှလေို့ကျရပါတယျ။ အကီင်္ကြ
ပနျးရောငျသနျးတယျပေါ့၊ အနီမကြ၊ ပနျးရောငျမကနြဲ့၊ ဒီ ဘောငျးဘီဝတျထားတယျ၊ ဒီ CNN သတငျးထောကျကလေ။ ကြှနျတျောတို့ထငျတာက၊ ဒီ CNN သတငျးထောကျက၊ ဒီ ရနျကုနျမွို.မှာရှိတဲ့ဆန်ဒပွပှဲနရောတှကေို သှားရောကျလလေ့ာစုံစမျးမယျထငျနတောပေါ့။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျတျောတို့ သှားကွညျ့တဲ့နရောမှာ၊ သူက ဒီမီးလောငျတဲ့နရောကို သှားစုံစမျးနတောကို တှလေို့ကျရတယျပေါ့။ မီးလောငျတဲ့နရောကို၊ သူက လြှောကျပတျကွညျ့နတောပေါ့။"
တကယျတော့ မွနျမာနိုငျငံထဲ စဈအာဏာသိမျးဆနျ့ကငျြဆန်ဒပွမူတှကေို၊ စဈတပျက ပဈခတျဖွိုခှငျးရာမှာ၊ အရငျ မီးလောငျမူ တခြို.ရှိခဲ့ပမေဲ့၊ ဒီတဈခေါကျကတော့ ကွီးမား ထူးခွားတယျလို့ သုံးသပျသူတှကေ ဆိုနပေါတယျ။